A ga-egosipụta Redmi K20 na May 28 | Gam akporosis
Fewbọchị ole na ole gara aga ka ekpughere ya Ugo elu nke Redmi nwere aha. Aha nke ndi China choputara bu Redmi K20, maka ụdị ihe atụ mbụ a malitere n'ime oke njedebe. Ọ dị ọnwa ole na ole kemgbe anyị nụrụ ọtụtụ asịrị banyere ekwentị a, nke ga-enwe Snapdragon 855 dị ka ihe nhazi n'ime. Otu data izu ụka a rutere banyere igwefoto ngwaọrụ.
Ugbu a, anyị amataworị olee mgbe anyị ga-atụ anya ka ewepụta Redmi K20 a na ọkwa. Ọdịdị ọhụrụ dị elu nke akara ika China nweela ụbọchị ngosi na China. Banyere mbido mba ụwa ọ nweghị ihe doro anya, ma ọtụtụ asịrị na-akọ banyere ya.
Anyị agaghị echere ogologo oge, n'ihi na dịka asịrị, mmemme mmemme ga-eme na Mee. 28 Mee bu ubochi ahoputara maka ngosi nke Redmi K20. Ọ ga-abụ na ihe omume na Beijing ebe anyị ga-ezute ekwentị a nke akara ndị China. A na-eme ya na elekere asatọ nke ụtụtụ (oge Spanish).
N'oge a anyị amaghị ihe ọ bụla banyere mbido mba uwa nke ekwenti a. Enwere ọtụtụ obi abụọ banyere ya, ebe ọ bụ na a na-eche ya na ụfọdụ mgbasa ozi na enwere ike ịmalite ya na mpụga China dị ka Pocophone F2, ọgbọ nke abụọ nke akara Xiaomi ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe ekwenyela ruo ugbu a.
N'ezie ụbọchị ndị a anyị na-aga ịmatakwu banyere atụmatụ ụfọdụ nke ụlọ ọrụ ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-echere ụbọchị asatọ ruo mgbe Redmi K20 bụ onye gọọmentị. Yabụ anyị ga-ama ma ọ bụrụ na a ga-ebuputa ya na mpụga China n'okpuru akara Pocophone ma ọ bụ na ọ bụghị.
Redmi K20 a na-ekwe nkwa ịbụ ekwentị nke mmasị, ịbụ ntinye nke akara ahụ na njedebe dị elu. Ọkara dị n'etiti akara ahụ na-ere nke ọma, jiri Nkọwa 7 dị n'isi. Ya mere, anyị na-ele anya ịhụ ihe ha ga-echere anyị maka njedebe dị elu ha. Ebe ọ bụ na o nwere ikike ịbụ onye a masịrị ọtụtụ n'ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Redmi K20 enweela ụbọchị ngosi
Esi ewepu PIN kaadi SIM gi na gam akporo